Akwụsị igwe cutter, End Mill, Carbide End Mill, Hss End Mill - FuXinCheng
carbide ọgwụgwụ na nkume igwe nri HRC55 4flutes
Anyị ga-enye ihe kasị mma àgwà ọrụ, na-eju afọ ahịa, na ugbua mere aha ọma n'ihi ahịa gburugburu ụwa anyị mma àgwà ngwaahịa, obi ụtọ na-welcome ahịa si n'ụwa nile.
Site na mmepe na ntinye nke teknụzụ nwere ọgụgụ isi, ụlọ ọrụ ọdịnala nke mbụ na nke abụọ na-aghọwanye ọgụgụ isi. Omume nke iji ígwè ọrụ ntanetị arụ ọrụ iji dochie ndị ọrụ dị mfe na mmepụta site na iji nwayọọ nwayọọ na-ewu ewu. A na-eji ígwè ọrụ eji arụ ọrụ, ...
N'ime afọ ise sochirinụ, ọdịiche talent dị n'ọhịa ngwaọrụ CNC dị elu na robot ga-eru 4.5 nde
Site na iwebata uzo ikuku abuo abuo, ulo oru a agbasawo ulo oru ya nke na-eme ka ndi mmadu kpochapu uzo, nke ga enyere ndi n'eme ihe aka n'enweghi ike igwe. The ọnwụ ngwá adopts elu uzo udi, whi ...
Shangao cutter ewebata mmadụ abụọ kwadoro cyclone square ubu-egwe ọka cutter na agụba 报错
1 、 Isi mmalite na ihe mgbaàmà na-agwọ ọrịa: Nke mbụ, anyị kwesịrị ịmara na coronavirus ọhụrụ ahụ nwere ike isi na anụ ọhịa, ma ọ bụ ụfọdụ ụdị isi batrị chrysanthemum, nke enwere ike ibute site na ịmetụta ihe, ụmụ irighiri ikuku, na ọnụ mmiri. Oge incubation bụ ụbọchị 1-14, ọkachasị ụbọchị 3-7, ...
Mgbochi ihe omuma akwukwo ohuru coronavirus ka oyi baa
Ma ị na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma ọ bụ na-ebi ndụ, oge ọ bụla ị gbanwere ngwaọrụ, ị naghị arụ ọrụ. Nke ahụ na - eme sistemụ mgbanwe ngwa-ngwa - nke a na - eme ka oge ngbanwee bụrụ obere sekọnd - kwesiri ịtụle. Preben Ha ... "Ngwaọrụ dị ndụ ọkachasị adịghị mfe ịbanye na igwe," ka Preben Ha ...
Tụlee uru nke sistemụ ngwa ngwa na-agbanwe ngwa ngwa
Waukesha, Wisconsin - Walter webatara Walter Prototyp seramiiki egwe ọka Mbelata MC275 / MC075. Ngwaọrụ abụọ a na - abawanye ọrụ, na - egbusi ọsọ ọsọ, na ọnụọgụ mwepụ nke igwe na igwe ihe ndị nwere nickel. Ngwaọrụ 'nrụgide na-enye ohere oge mkpụmkpụ karịa n'ihi nchikota ụgbọ ala ha ...
Nkuku okirikiri End Mill
Akụkọ kachasị ọhụrụ Global Spherical End Mill Market bipụtara site na akwụkwọ akụkọpedia.com na-atụle ihe dị iche iche dịka nha ahịa, ọnụego mmepụta, ọnọdụ mbupụ mbupụ, ahịa, na ọnọdụ nnweta. The n'ichepụta usoro analysis, ahịa òkè nke eminent Global Spherical End Mill ụlọ ọrụ pla ...
Global Spherical End Mill Market 2019 Analysis, Segmentation, Product Research, Asọmpi Analysis, Trends na Outlook Site 2025
Na Walter Cut MX, Walter AG webatara oghere na mbepụ ahịa. Agwa ahụ abụghị naanị tozuru etozu na teknụzụ, kamakwa ọ na - emeri adịghị ike nke sistemụ asọmpi dị ugbu a: iji zere njehie nrụnye site na ịtọzi ntụtụ ọnọdụ, yana iji melite ngbanwe ...
Na Walter Cut MX, Walter AG webatara oghere na mbepụ ahịa.
Dabere na ọnụ ọgụgụ nke National Bureau of Statistics, site na Jenụwarị ruo Nọvemba, mmepụta nke ọla iri na-enweghị isi na China bụ 50.43 nde tọn, mmụba kwa afọ nke 6.1%. N'ime ha, ọla kọpa a nụchara anụcha bụ 8,17 nde tọn, elu 10.7% kwa afọ; isi aluminum p ...
Site na Jenụwarị ruo Nọvemba 2018, mmepụta nke ọla iri na-enweghị ọla na China bụ 50.43 nde tọn, mmụba nke 6.1% kwa afọ.